မိတ်ဆက်စာလေးတစ်စောင်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိတ်ဆက်စာလေးတစ်စောင်ပါ
Posted by captainamerica on May 9, 2011 in Copy/Paste | 33 comments
ဘာမှ ရေးမကြီးတဲ့ စာလေးတစ်စောင်ပါ.......
ကျွန်တော်က ဒီ Forum ရဲ့ Member အသစ်တစ်ယောက်ပါခင်ဗျာ….အားလုံးနဲ.
Fresher welcome အစီအစဉ်လေးလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး ခေါင်းမြီးခြုံကုလားမလို မျက်နှာဖုံးထားရာကနေ ထွက်လာကြရပါမယ်။ ကျင်းပမယ့် နေရာကတော့ တာဝတိံသာပါ။ နတ်ရထားနဲ့ သွားရမှာဖြစ်ပြီး နတ်သုဒ္ဓါကျွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နတ်ဝတ်ပုဆိုး တိမ်မီးခိုးတွေတော့ ၀တ်မလာရပါဘူး။ စရိတ်စက ကျသလောက် အားလုံးကို သဂျီးက ကျခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနား တက်ရောက်လိုသူ Senior များ Junior များ အားလုံး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါပြီ။
ရွာထဲမှာ စီနီယာ၊ ဂျူနီယာ မရှိပါဘူးဗျာ။ တခုတော့ရှိဒယ်…ကပ္ပတိန်က ရုပ်ဝါဒီသဂျီးဘက်ကလား၊ ကမ္မဝါဒီ ရွာသားတွေဘက်ကလားဆိုတဲ့ ရန်၊ငါ စည်းခြားရမယ်။ (ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီဆိုရင်တော့ ခြွင်းချက်)
သဂျီးလူဆိုရင် သူကြိုက်တဲ့ ရုပ်ဝါဒ ပို့စ်နဲ့ စဖွင့်ပြီး ရွာသားများဘက်ကဆိုရင် သဂျီးကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ ပို့စ်တင်ပေးပါ။ (ကြိုက်တာဝေဖန်လို့ရတယ်၊ မကောင်းကြောင်းဖြစ်ရင်ပြီးရော)။ ကြားမှာနေရင်တော့ နှစ်ဖက်ရဲ့ လက်နက်ကြီးစာမိတဲ့ မြေဇာပင်ဖြစ်ကိန်းရှိတယ်…..
You are welcome. Please enjoy the lovely tradition of the village.
လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရွာထဲမှာ ငြင်းခုန်ရင်း ဗဟုသုတတိုးတက်များပြားလာစေဖို့ မနော မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ ပျော်ရွှင်စွာ ရွာထဲ လည်ပတ်နိုင်ပါစေ….
Welcome ပါ Captain!!!! Captain က ဘာ captain လဲ ဆိုတာပြောပါဦးဗျ….
သင်္ဘောဒရိုင်ဘာ။ လေယဉ်ဒရိုင်ဘာ၊ အမေရိကားဒရိုင်ဘာတွေလည်းကြိုဆိုပါတယ်..။
မန်းလေးသား ကိုပေါက်ကလဲ ကြိုဆိုပါသဗျာ။
ဘီးကြို အမာရိကေ ရေ
Mandalaygazette ကတော့စိတ်ပါဝင်စားသူအားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်၊ ရွာထဲကိုဝင်ပြီးလည်တော့မယ့် (ရွာလည်တော့မယ့်) captainamerica ကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
king ကတော့ သပြေပန်းနဲ့ကြိုပေးပါတဲ့။
Captain ကိုတော့ စပယ်ပန်းကုံးကြီးစွပ်ပေးပြီး ကြိုရမယ်ထင်တယ်၊
မိတ်ဆက်တယ် ဆိုတော့.. အထိန်းအမှတ် အနေနဲ့ ဘာများ စားစရာပါသလဲကွဲ့..
ကြိုဆိုရေး အစီအစဉ် တခုခု ဖန်တီးလိုက်မယ်။
ပန်ဂုံးကြီး စွတ်မာချိုရင် ခါချဉ် မပါစေနဲ့နော်
Warmly Welcome to U,our new villager.But,….frd
Be aware of the cyclones in our village…it is more violent than any strom in the sea!
But..,sometimes….. cold breeze comes that makes U peaceful……
ရွာ အကြောင်းတစေ့တစောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ရွာထဲမှာ သဂျီးက အုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတော့ သဂျီးကအကြီးဆုံးပေါ့နော် သဂျီးကိုကျတော့ ဘယ်သူထက်အုပ်ချုပ်သလဲဆိုတော့ သက်ကြီးဝါကြီး ရွာသားတွေက ပြန် အုပ်ချုပ်တယ် သဂျီးမလှုပ်နှိုင်းအောင်ပေါ့ ရွာထဲကိုဝှေ့ ကြည်မယ်ဆိုရင်အဖွဲ့2 ဖွဲ့ ရှိတယ် ပို့ စ် တင်တဲ့ အဖွဲ့ နဲ့ကွန်မန်းရေးတဲအဖွဲ့ တွေပေါ့ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့ တခါတလေပို့ စ် တခုမှာ ပွဲ ဆူလာခဲ့ ရင် သဂျီးကို ရွာထဲ က ထရေ ဆိုင်မှာသွားသွားခေါ်ရတယ် (သဂျီးကလမ်းကျုံရင်ဝင်တက်လိုပါ) ဒီရွာထဲမှာ စာပေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် စည်းကမ်းတင်ကျပ်တယ် (ကိုယ်တိုင်တာဖတ်ကြည်ပါလေ့ ) ဒီရွာထဲက ကွမ်းတောင်ကိုင် ကိုလဲသိအောင်ပြောရဦးမယ် နာမည်ကတော့ခေါ်ရတာ — နေလို့ကိုယ်ဟာကိုသာ ပွိင့်အများဆုံးထဲ က ထိပ်ဆုံးနာမည်ကိုသာဖတ်ကြည်ပါလေ့
thanmyint84 … က လက်ကမ်းနေတယ်လေ လက်ပြန်ပေးလိုက်တော့လေ …
OQ … တို့လည်း ၁၉ နှစ်ပါ … Shake Hand
OQ … ၁၉ နှစ် … Shake Hand
comment ပြန်တာနောက်ကျတာတောင်းပန်ပါတယ်……ဒီရက်ပိုင်း Computer တောင်မကိုင်နိုင်အောင်အလုပ်များနေလို.ဗျ…..ကိုကြောင်ကြီးရေကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝါဒီသမားလို.့
သူငယ်ချင်းတွေမေးထားတဲ့ question ကိုတစ်ခါတည်းစုဖြေလိုက်မယ်နော်
ကို King ကမေးထားတယ်နော် ဘာ Captain တုန်းလို. ကျွန်တော်အရုပ် Captain ပါခင်ဗျ…… :-)
အသက်ကတော့၂၇ ပါ… ကျွန်တော် ဗမာစစ်သားမဟုတ်ဖူးနော် captain america နော် .မမေ့ကြနဲ့နော်…… :-) အားလုံးကကအခုလိုစည်စည်ကားကားနဲ.၀ိုင်းပြီးကြိုဆိုကြတာအရမ်းဝမ်းသာပါ
ဘယ်သူမှလျှောက်မပြောကြနဲ့နော် Bin laden ကို ၀င်ဖမ်းတဲ့တပ်ကိုကျုပ်ဦးဆောင်ခဲ့တာဗျ
ဘင်လာဒင် ၀င်ဖမ်းတဲ့ အထဲမှာ ပါတယ် ဆိုရင် လိပ်စာလေး ပြောပြပေးပါ။
ပိုပြီး တိကျတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြောပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။
တာလီဘန်ကို သတင်းရောင်းစားချင်လို့.. အဟမ်း.. ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ်လေ သိတယ်မလား။
လုပ်လိုက်လေ မမဆူးနဲ.ကျွန်တော်နဲ.ပေါင်းပြီးစီးပွားရေးလေးလုပ်ကြတာပေ့ါ တာလီဘန်ကိုတော့မရောင်းပရစေနဲ. ကျွန်တော်ကိုလည်လာလှီးကြမှာမို.လို.ပါ ဘင်လာဒင်ကိုဆော်ထည့်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်ပဲခင်ဗျ :-)
လာ လာ ဝင် ဝင် ပြော ပြော ရေး ရေး ဖိုက် ဖိုက် ထွက် ထွက် ပြေး ပြေး ……………….
အော် ခက်တော့နေပါ ပြီ captain ဆိုတိုင်းစစ်သားထင်တော့တာကိုး ကျွန်တော်အရပ်သားစစ်စစ်ပါခင်ည…..
အဲဗျာ အရပ်သားလဲပြောသေး စစ်စစ် ဆိုတာကြီးကဘာကြီးတုန်း
အော် စောင့်သာကြည့်ကြပါတော့ တငယ်ချင်းတို.ရယ် ခက်ပဂျာ ရှင်းလေ ရှုပ်လေဖြစ်နေပြန်ပါဘီ..
nature ပြောသလိုရွာစလည်နေပြီဗျို. …….. မလိခ ကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျ ….ကျွန်တော်
user name ကိုက captain လို.တပ်မိတာသောက်ကျိုးနည်းတာပဲ…..captainamerica ဆိုတာ
marvel super hero ထဲက ဇာတ်ကောင်အရုပ်လေးတစ်ရုပ်ဗျ…ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က crazy
အရမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အရုပ်လေးမို.လို. G-talk စသုံးတာတောင်အဲဒီ နာမည်ပဲပေးပြီးသုံးခဲ့တာပါဗျ
captain နာမည်တပ်ထားတိုင်း လို.စစ်သားလို.မထင်ပါနဲ.ဗျ…. G-talk မှာတစ်ခါမှအမေးမခံ
ရ၀ူး……ဒီ name ပဲသုံးတာ ၀ှုး တော်တော်ကိုရှင်းပြရမယ်နဲ.ထင်တယ်….. စောင့်ကြည့်ပါဗျာ
မိတ်ဆက် စာ ပြန်ရင်းနဲ့ ရွာလည်နေပြီ။ ဆုံးဖြတ်ကြပါတော့ ဆိုတော့ …. ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ခိုင်မာတယ်.. တာလီဘန် ကို သတင်းရောင်းစားမယ်။ ထွက်မပြေးနဲ့နော်.. ပိုက်ဆံ ဆိုတာ ဟိုလို မဟုတ်ရင် ဒီလို ရှာရတယ် ကွဲ့.. အဟဲ..
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမဆူးရေ……ကျွန်တော်မှာမိတ်ဆက်စာရေးရင်းနဲ. ကို nature နမိတ်ဖတ်သလိုတကယ်ကြီး
လောကဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ virtual world တစ်ခုပါပဲ ကိုယ်ရဲ့ပြင်ပက life ကိုတော်ရုံတန်ရုံမရင်း